Taom-baovao, fanombohana vaovao
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-12-30
Mandeha haingana ny fotoana, tsy nahy ary hatramin'ny faran'ny taona. Tamin'ny taona 2020 dia niaina ny COVID-19 izahay, saingy mankasitraka ny orinasan'ny tsirairay, izay nahatonga anay hanana hery ampy hialana amin'ny fotoan-tsarotra. Haneno ny lakolosy amin'ny 2020.2021. Manantena aho fa mbola hiaraka aminay amin'ny ...
Zhejiang Feegoo Technology Co., Ltd. Manatreha ny 2020 CEC EXPO
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-12-21
Rehefa mitatra hatrany am-pitan-dranomasina ny valan'aretina COVID-19 manerantany, ny orinasam-barotra vahiny dia miatrika ny olana mahazo ny "tsy fahampian'ny mpiasa" amin'ny tapany voalohany sy ny "tsy fisian'ny baiko" amin'ny tapany faharoa. Indostrialy maivana any Shina, amin'ny maha firenena varotra vahiny lehibe azy, ao orde ...
Ahoana ny fomba hisorohana ny valanaretina amin'ny olona
Rehefa mandeha ny fotoana, ny 2020 dia taona hahatratrarana fiarahamonina mandroso antonony amin'ny lafiny rehetra. Tokony hihorakoraka sy hientanentanana amin'izany ny olona. Raha mbola tototry ny hafaliana amin'ny taom-baovao ny olona, ​​dia nanomboka ady tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fotoana nanenoan'ny lakolosin'ny Taon-dava. Nov ...
Miasa mafy izahay hiaro amin'ny 2019-nCov, manantena fa afaka manampy ny olona ny vokatra dispenser an'ny savony
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-12-08
Izao dia voan'ny areti-mifindra coronavirus izao tontolo izao, hoy ny tale jeneralin'ny World Health Organization, rehefa naneho ny ahiahiny lalina momba ny “ambaratongan'ny tsy fandraisana andraikitra” amin'ny ady amin'ny fihanaky ny aretina. Tao anatin'ny tapa-bolana lasa izay, ny isan'ireo tranga ou ...
Ahoana no fiasan'ny fanamainana tanana?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-10-15
Na miasa any amin'ny birao ianao, manao fanatanjahan-tena amin'ny toeram-pialam-boly na misakafo any amin'ny trano fisakafoanana, manasa tanana sy mampiasa fanamainana tanana dia zava-mitranga isan'andro. Na dia mora aza ny tsy mijery ny fomba fiasan'ny fanamainana tanana, dia mety hahagaga anao ny zava-misy - ary azo antoka fa hampisaintsaina anao indroa izy ireo amin'ny fotoana manaraka anao ...
Ny haben'ny motera tsy misy borosy sy motera borosy
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-06-24
Ny fitaovan'ny motera tsy misy borososy dia azo ampiasaina amin'ny indostrian'ny ronono, indostrian'ny labiera, indostrian'ny fanodinana hena, indostria fanodinana soja, indostrian'ny fanodinana zava-pisotro, indostrian'ny fanodinam-mofo, fivarotam-panafody, ozinina miorina amin'ny elektronika, ary atrikasa madio mangataka bebe kokoa sns. ..
FEEGOO Manatreha ny Canton Fair 124th
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-11-26
Nosantarina tao amin'ny Foibe Fivoriambe sy Fampirantiana Iraisam-pirenena any Guangzhou ny faha-124 (fararano) Canton. Zhejiang FEEGOO Technology Co., Ltd. dia nandray anjara tamin'ny Canton Fair niaraka tamin'ny vokatra vaovao tany am-boalohany, nanintona indray ny sain'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao ary nahatratra su feno ...
Fanamainana tanana maro kokoa an'ny FEEGOO
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-09-10
Smart touch Speed ​​ny rivotra sy ny mari-pana amin'ny rivotra Asiana sary namboarina HEPA natsangana https://player.youku.com/embed/XMzQ5OTE0NzM5Ng==
FEEGOO New Design Double-sided pengering
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-08-05
Fitaovana vy 304 / rivotra mafana na mangatsiaka / Hepa https://player.youku.com/embed/XMzQ5NjY5MTE1Mg==
FEEGOO Ultra-manify Robot Manadio
tamin'ny admin tamin'ny 18-06-20
1.6.6CM vatana manify manify, mihetsika maimaimpoana, misolafaka ao ambanin'ny ankamaroan'ny fanaka hanadiovana ny zorony tsy hita. 2.APP fanaraha-maso lavitra, na fivoriana, miasa na amin'ny fialantsasatra, misokatra sy mampiasa fotsiny, mankafy ny fidianao rehefa tonga any an-trano. Famolavolana ny maha-olombelona – aseho amin'ny efijery. 4.Sadio fanadiovana sy recharging fiara. 5.Timer ...
Zhejiang Feegoo Technology Co., Ltd. Manatreha ny foara ara-barotra Sinoa (Polonina) faha-7
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-06-15
Orinasa efa ho 700 avy any Zhejiang, Jiangsu, Guangdong, Jiangsu, Henan, Shandong, Jiangxi, Fujian ary toerana hafa no nandray anjara tamin'ny fampirantiana. Efa ho 1.400 ny trano rantsankazo natsangana teo an-toerana, ary 28 000 metatra toradroa ny velaran'ny fampirantiana. Fampirantiana lehibe roa (taorian'ny fampirantiana Dubai). Ny exhi ...
Fa maninona no mifidy FEEGOO Generation fahenina amin'ny tanana roa tanana?
Araka ny fantatry ny rehetra, ny fanamoriana jet jet misy sisiny roa dia fitaovana fanadiovana ampiasaina hanamainana tanana ao amin'ny trano fidiovana, raha toa kosa ilay mpanamory fiaramanidina jet sisin-tanana FEEGOO fanatsarana indroa miohatra amin'ny karazana nentim-paharazana. ity milina fanamainana tanana vaovao ity dia ho tsara kokoa amin'ny fitsitsiana angovo sy ...